Gụọ nanị flash mbanye
Gịnị bụ Dee Nchedo?
Nke a bụ a nchekwa usoro na-enyere gị aka ịnọgide na ọdịnaya nke a disk ala. Ọ na-egbochi onye ọ bụla si na-agbakwunye mmezi data na akụkụ nke na-echebe. Iji "dee" on a disk bụ usoro nke na-azọpụta data na-echebe akụkụ. Nyochawa, dee nchebe na-egosi na kwuru data-apụghị gbanwere n'ụzọ ọ bụla. Ya mere, ị pụghị ihichapu, dezie, akpali ma ọ bụ igosi ihe ọ bụla ọzọ ihe na nke a data. N'ọnọdụ ụfọdụ, nanị wezụga na nke a bụ ikike na-agụ nke a data.
Gịnị mere Dee Chebe Data?
Otu n'ime ndị kasị isi Njirimara nke data bụ eziokwu na ọ ga-adị mfe gbanwetụrụ. Nke a na-eme ka ọ na-enweghị ka mkpachapụ na mfe distortion nke ziri ezi. Ụfọdụ data bụ incredibly bara uru, na nwere na-echebe site ọbụna nwetụrụ mgbanwe.
Ihe doro anya ngwọta ebe a bụ ime ka ọ untouchable - N'ihi ya dee nchebe. Usoro a bụ nzuzu àmà - ebe ọ bụ na n'ókè nke ịtụkwasị jikoro nke nchebe na data, ma ọ bụrụ na ha nwere ike emebiwo ma ọ bụ overridden n'ihu tinyere akara.
Nke abuo, n'ihi na ndị mmadụ na-agachi cyber-cafes ma ọ bụ jiri multiple PC na-echekwa ha ọmụma, e nwere otu nhọrọ dee chebe ha mpụga nchekwa ngwaọrụ. Ihe kpatara nke a bụ na e nwere manụ nje nke onwe-emepụtaghachi onwe ha n'ime pen draịva. Dee nchebe na-egbochi nke ahụ.
Nnukwu isi nke usoro bụ eziokwu na ike n'ezi ihe nke ọmụma na-nọ na-emebibeghị, n'agbanyeghị nke ọnụ ọgụgụ nke aka na ọ na-agabiga. Otú ọ dị, ọ na-nwere a downside - ụfọdụ data bụ ike na mgbanwe na oge; N'ihi ya, o wee na-ejere ndị nchekwa na ngwaọrụ nweghị mgbe ọ na-agba ọsọ nke ya uru.
Olee otú dee Chebe a Flash Drive
Ihe kacha ụzọ nke dee-echebe a flash disk bụ site ịzụta otu nke na-abịa na a mgba ọkụ mere kpọmkwem n'ihi nke a.
Otú ọ dị, ọ bụghị ihe niile flash draịva na-kere dokwara, n'ihi ya e nwere na-mmezi jikoro maka ọbọ otu ihe mgbaru ọsọ ndị na nke na-adịghị mgba ọkụ. Anyị agaba...
Step1. Rịba ama mbanye akwụkwọ ozi metụtara gị USB flash disk, dị ka E, H, J, K, wdg
Step2. Mbụ emeghe Windows Explorer. Nke a na-adị mfe mere site na ịpị Windows Key + E.
Step3. Mgbe Explorer Pop elu, nri pịa na akwụkwọ ozi si n'aka akụkụ # 1.
Step4. A menu tụlee ala na-ahọpụta gị mbanye. Na ala, ị ga-ahụ akụkụ e dere "Properties." Pịa na na mkparịta ụka igbe.
Step5. Họrọ "Nche", mgbe ahụ, n'okpuru "User" ma ọ bụ "Group", họrọ "Onye ọ bụla" na mgbe "Dezie", dị ka e gosiri ihe oyiyi ahụ.
Step6. Ị ga-achọpụta a taabụ kpọrọ "Ikikere." The akụkụ dị mkpa maka edezi na kpọrọ dị ka "ikike maka onye ọ bụla." Ebe a bụ ebe ị ikpo disk dị ka dee na-echebe, site ịlele ahụ "agọnahụ" igbe.
Step7. Pịa "Mee" ma ọ bụ "OK" ọ ga-mere.
Rịba ama na mgbe ị na-manye dee nchebe ọ bụla na kọmputa, onye ọ bụla gụnyere ị ga-enwe ike gbanwee data.
Olee otú wepụ dee nchebe site a USB Flash mbanye
Step1. Nkwụnye ke dee-echebe disk.
Step2. Press Windows + E na nri click na mbanye akwụkwọ ozi nke disk na ajụjụ.
Step3. Right-pịa na disk na-ahọrọ "Njirimara", mgbe ahụ, "Nche."
Step4. Họrọ "Onye ọ bụla" n'okpuru "Group" aha
Step5. Họrọ "Dezie" na-aga "Ikikere"
Step6. Tinye akà rà niile igbe kpọrọ dị ka "Ka"
Step7. Pịa "Mee" na ụzọ ọpụpụ. Gị disk si dee nchebe ugbu a na-ewepụ.
Olee otú usoro a na-agụ - nanị flash mbanye na dee nchebe
Nke a bụ usoro nke ikpochapụ ihe niile bụ nke dị na disk. N'okpuru ebe a bụ mkpa nzọụkwụ na-eduzi Ọkpụkpọ gị na-agụ-nanị flash mbanye dee nchebe
Step1. Mepee ndekọ nchịkọta akụkọ. A nwere ike mere site na ịpị "Windows" isi na dee "regedit." Na ngwa na-akpọ "regedit.exe" ga-arịọkwa nchịkwa ikike na-agba ọsọ; pịa "OK."
Step2. Chọta ndekọ kpọrọ "Computer \_ HKEY_LOCAL_MACHINE \_ usoro \_"
Step3. Ozugbo i navigated ka isi, họrọ "CurrentControlSet \_ Control \_ StorageDevicePolicies"
Step4. The "Dee Chebe" uru na-egosi elu. Right- pịa a nhọrọ (ebe ọ na-kpọrọ dị ka 1).
Step5. Gbanwee uru 1 0, ma pịa OK.
Step6. Mee mgbanwe na Malitegharịa ekwentị ahụ na kọmputa. Wepu flash mbanye si USB n'ọdụ ụgbọ mmiri, mgbe na ya.
Step7. Mgbe kọmputa amama on, fanye flash mbanye na nri click na mbanye akwụkwọ ozi.
Step8. Họrọ "usoro".
Step9. Họrọ "Ndi an-kpọ oke size" mgbe ahụ "Malite" na pịa "Ee" mgbe ị na-nyere ịdọ aka ná ntị (na ndị niile na data ga-efu).
Step10. Pịa OK mgbe mere.
I nwere ugbu a ọma formatted eriri flash mbanye. Ị nwere ike ịzọpụta gị faịlụ otu ugboro ọzọ, na-edebe ha protected.A oké ụzọ nke na-edebe gị faịlụ mma ga-abụ ka ha gbanwee Njirimara na-ezo, ebe ọ bụ na ndị ọrụ ndị ọzọ na-adịghị aga dị ka unwitting ha. The mgbagha n'azụ a bụ na ndị mmadụ adịghị aga achọ ihe na-bụ zoro ezo.
Otú ọ dị, usoro a na-adịghị na-ekwe nkwa na-enye nsonaazụ kacha mma, ebe ọ bụ na ọ na-echebe naanị si ndị mmadụ, na ọ bụghị malware.
> Resource> Flash Drive> Gụọ naanị flash mbanye - esi tinye ma ọ bụ wepu dee nchebe